Sidee si fudud gabar kaaga heli kartaa? – Filimside.net
Sidee si fudud gabar kaaga heli kartaa?
Hadii aad dooneysid gabar iney kaa hesho ha ahaato mid aad halmeel kawada sheqeysaan ama xaafad isla dagantihiin amaba wax isla barataan waa lama hurraan in arimaha hoos ku xusan lagaa helo ama qaarkood hadii kale iska ilow qoftaas.
INAAD NOQOTO QOF IHTIMAAM SIINAYA.
Waa kugu qasab inaad noqoto qof ihtimaam siiya gabadha siiba markaad isla hadleysaan ama sheekeysaneysaan hana isku dayin inaad ku mashquusho markaad iyada la hadleyso waxyaabo aanan muhiim aheyn sida saacadaada ama taleefankaaga iwm waayo gabdhaha aad ayay uga helaan ninka qiimaha u yeela dhankoodana fiiriya.
Ma jecla gabdhaha ninka aan qiimo u yeelin oo waxyaabo kale misna iska fudud kaga mashquula waxayna u arkaan qofkii ay qiimo ka waayaan inuusan jeclleyn.
KAFTAN QURUX BADAN.
Hadii aad leedahay kaftan furan oo la fahmi karo xaqiiq waxad si fudud kula wareegi kartaa qalbiga gabadha waayo gabdhaha aad ayay u jecelyihiin wiilka ka qoslisiiyo waxayna aaminayaan inaad tahay qof bashaash ah oo nolosheeda farxad siin kara.
Hadii aad muuqaalo kaftan ama sheeko qosol badan xitaa u dirto iyadana waa heer sare hadad awoodidna maalin u kaxeey goobaha madadaalada ah.
Gabdhaha qaar markii hadiyad la dhaho farxad ayayba la dhalaalan marka ragow dumarka hadiyada haloogu roonaado waa hadii aad dooneyso inaad qalbigeeda kasbato boosna ku yeelato.
Sidoo kale waa kuu muhiim inaad waxbadan ka fikirto nooca hadiyada aad rabto inaad gabadha siiso, hana isku dayin inaad hadiyadaha ka badiso waayo hadiyada ayaad qiimo tireysaa.
INAAD MARKASTA GARAB SIISO.
Waa kuu muhiim inaad gabdha caawiso xiliga ay garab u baahantahay si aad qalbigeeda ugu guuleysato siiba inaad u rumeyso riyo ay waligeed ku taami jirtay iwm.
Gabadha hadii ay dareento inaad garab taagantahay oo aad caawineyso si fudud ayay kugu aamineysaa mustaqbalkeedana kuu siineysaa waayo waxaad galisay kalsooni ah inaad markasta garab joogeysid.
Qiimo ayaad u yeeshay waad la kaftantay kana qoslisiisay, hadiyad qurux badana waad u geysay markastana waad garab taagantahay waa tee gabadha intaas loo sameeyay ee aan wiilkaas jeclaan Karin??
Waxaa Aqrisay 648